Umntu ofezekileyo -Ungazi njani ukuba uyinyani | IBezzia
Wazi njani ukuba ufuna ukugqibelela
USusana godoy | 05/09/2021 18:00 | Psicología
Ukufezeka akukho, nokuba sizama ukukufumana ngazo zonke iindlela. Kodwa kukho umntu ogqibeleleyo kwaye oku kunokuba yinto elungileyo okanye embi. Kungenxa yokuba njengoko sisazi kakuhle, yonke into esiyigqithisileyo iya kuba mbi kwaye ibe yingozi. Yiyo loo nto namhlanje sityhila onke amanyathelo esiza kuwathatha ukufumanisa ukuba ukhona okanye awukho.
Xa sithetha ngomntu ogqibeleleyo, kuyinyani ukuba sinokuba phakathi kwamatyala ahlukeneyo. Kuba Ukuba yinto ekuvumela ukuba uphucule ngakumbi kwiimpawu onazo kwaye ikwenze ukhule, iya kuba ntle ngokupheleleyo. Kodwa oku akusoloko kunjalo, ke kuya kufuneka sithethe malunga nenxalenye engathandekiyo esikhokelela kuyo.
1 Kuthetha ukuthini ukuba ngumntu ogqibeleleyo?
2 Nayiphi na impazamo kukusilela
3 Okanye umnyama okanye umhlophe
4 Abamameli iingcebiso
5 Kuya kuba nzima kubo ukwenza izigqibo
Kuthetha ukuthini ukuba ngumntu ogqibeleleyo?
Singatsho ukuba ukugqibelela lolunye lweempawu abanokuba nazo bonke abantu. Uphawu njengabanye abaninzi oluya kuba yinxalenye yobuntu bethu. Kuyatshiwo ngomntu ukuba ufuna ukufezekisa uthotho lweenjongo kodwa ngaphandle kokusilela, okanye enze iimpazamo kuba kubo iyakuba kukusilela ukwenza eyona mpazamo incinci. Ke ngoko, inqanaba lamaxhala akho liyonyuka, unyamezelo luzokwehla kwaye ubomi bakho buya kuba luxinzelelo rhoqo, lokufezekisa iinjongo ezingenakwenzeka njengoko unokucinga ngezihlandlo ezininzi. Ewe kunjalo, konke oku kuhlala kusiwa kweyona nxalenye imbi. Kungenxa yokuba njengoko sibonisile, ukuba uzibekela iinjongo, umda kwaye usebenze kuzo ngenzondelelo kunye nokugqibelela, uya kufumana olona hlobo lubalaseleyo.
Nayiphi na impazamo kukusilela
Olu lolunye lweempawu abanazo abantu abagqibeleleyo. Njengoko siphawule kakuhle, bafuna ukwenza umsebenzi ococekileyo. Ukuthi ngale ndlela inokuba yeyona nto intle, kodwa kuwo wonke umsebenzi kwaye kubo bonke ubomi kufuneka kusoloko kukho umda wempazamo okanye ukusilela kunye nempazamo kuba oku kuyakusenza sifunde. Umntu ofuna ukugqibelela akayiboni injalo. Ukuphinda kabini kuyafuneka ukunqanda ukuwela kule nxalenye kuba kubo iya kuba kukusilela kwaye ukuziva unetyala kuya kubakhapha.
Okanye umnyama okanye umhlophe
Olunye uphawu lomntu ofezekileyo kukuba abalishiyi igumbi lengwevu. Oko kukuthi, umhlophe yenye yemibala esisiseko ngokugqwesa kwaye sinokuthi simele indawo. Ngelixa umbala omnyama umele elinye icandelo, kodwa ukusuka kwenye uye kwenye, kuya kubakho indlela eyahlukeneyo. Ngamanye amagama, kuhlala kukho umhlaba ophakathi, kuncinci kubagqibeleleyo.. Bangumda ogqithileyo, ngaphandle kokukhetha. Oko kusikhokelela ekubeni sikhankanye ukuba ngabantu abagxekayo kwaye ukuba bawe endleleni kunokuba lihlazo kubo.
Njengomgaqo jikelele, ayinamsebenzi into obaxelela yona, kuba abalamameli ingcebiso yabanye. Baneenjongo zabo kwaye nokuba ufuna ukubanika izimvo ezilungileyo abazukuzibamba. Kuba zona ngokwazo zinazo okanye zijonga ukuba zingcono kunezo zijikelezileyo. Ke singayongeza loo nto Kananjalo abanyamezelani, kuba ukuba bahlala kunye nabo, ngakumbi nangakumbi ngabantu ababangqongileyo. Banodidi olunye lweembono kwaye ukuba azilingani okanye ziyafana nazo, ngekhe bafune ukwazi enye into. Yiyo loo nto kuza inyani yokuba bangazukubabela abanye abantu, kuba bayakholelwa ukuba abayi kuyenza njengabo.
Kuya kuba nzima kubo ukwenza izigqibo
Nangona bebonakala beqinisekile kakhulu ngokwabo kunye noko bakucingayo, kule meko abanakuqiniseka kangako, kodwa sikhona isizathu. Ayikuko ukuba abayicacelanga into abayifunayo, kodwa kungenxa yokuba boyika ngenene ukusilela. Ke xa kufuneka benze isigqibo, bayakucinga kabini kwaye ngamanye amaxesha, nokuba iya kudala uxinzelelo. Emva kokwazi zonke ezi mpawu, uya kuba sele ucacile ukuba unjani umntu ogqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Wazi njani ukuba ufuna ukugqibelela
Izitayile zeSikolo samaBanga aPhakamileyo: Ngokukhawuleza kwaye zilula
Ucoceko lwempumlo kwiintsana